Category: game - @mmunited
ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပိုစ့်မှာ ကတိပေးခဲ့သလိုပဲ ဒီနေ့မှာတော့ monsters တွေရဲ့ စွမ်းရည်(ability)တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးသားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Monster တွေမှာ သူ့ရဲ့ level နဲ့လိုက်ပြီးတော့ စွမ်းရည်တွေရရှိပါတယ်။ လယ်ဗယ် အမြင့်ဆုံးမှာကတော့ သူ့ရဲ့ စွမ်းရည်တွေ အကုန်လုံးကို ရရှိပါတယ်။ အများဆုံးရနိုင်တာကတော့ စွမ်းရည် ၄ မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ Angel of Light ဆိုရင် ပျံသန်းနိုင်စွမ်း၊ သူများကို သွေးပြန်ဖြည့်နိုင်စွမ်း၊ သူများကို အသက်ပြန်သွင်းနိုင်စွမ်းနဲ့ damage ကိုတိုးစေနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိပါသည်။ သူများကို အသက်ပြန်ရှင်စေတဲ့ စွမ်းရည်ကတော့ ဂိမ်းတစ်ခုလုံးမှာ သူမဆီမှာပဲရှိပါတယ်။
နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော shield ပါ။ ပါဝင်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းကို နှိုင်းယှဉ်ရင် အနီးကပ်နဲ့ အဝေးပစ်တွေက မှော်(magic သုံးတဲ့သူက ပိုများပါတယ်)။ Shield ကတော့ အဲ့ဒိ dagame နှစ်မျိုးစလုံးကို ၁ လျှော့ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒိတော့ အဲ့ဒိ စွမ်းရည်က အတော်အသုံးဝင်တဲ့ စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ အလားတူ စွမ်းရည်ကတော့ Void ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ magical damage ကို ၁ လျှော့ပေးပါတယ်။ Alric Strombringer နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခါမှာ သုံးမယ်ဆိုရင် ကောင်းမွန်ပါတယ်။
အချို့အကောင်တွေက သွေးပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖြည့်တာနဲ့ သူများကို ဖြည့်ပေးတာပါ။ Haunted Spirit လို အကောင်တွေကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သွေးပြန်ဖြည့်ပါတယ်။ Divine Healer လိုအကောင်တွေကတော့ သူများကို သွေးဖြည့်ပေးပါတယ်။
Weaken ဆိုတာကတော့ ရန်သူ့ရဲ့ သွေးကို တစ်ခုလျှော့ပေးပါတယ်။ သူ့ကို တန်ပြန်နိုင်တာကတော့ Lyanna Natura ရဲ့ စွမ်းရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Slow ကတော့ monster ရဲ့ လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းကို ၁ လျှော့ပေးပါတယ်။ ဘယ်သူက အရင်တိုက်ရမလဲ ဆိုတာကို monster ရဲ့ လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းနဲ့ တိုင်းတာတဲ့အတွက် အရင်ဆုံး တိုက်ခိုက်ရတဲ့သူက ပိုပြီး အသာရပါတယ်။
Rampage ကတော့ လွယ်လွယ်ပြောရရင် ကိုယ့်ကို လာထိရင် စိတ်ဆိုတယ်ပေါ့။ အဲ့ဒိအခါမှာ damage လဲတက်လာပါတယ်။ Naga Warrior, Clay Golem တို့မှာ တွေ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သွေးလျော့သွားတာနဲ့ damage တက်လာပါတယ်။
Sneak ကိုလဲ မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ Sneak ဆိုတာကတော့ ချောင်းတိုက်တာပါ။ နောက်ဆုံးမှာ ထားတဲ့အကောင်ကို တိုက်ပါတယ်။ သူကတော့ အနီးပစ်၊အဝေးပစ်မရွေးပါဘူး။ Snipe ဆိုတာကတော့ လက်ဖြောင့်တပ်သားပေါ့။ ရန်သူ့ရဲ့ အဝေးပစ်ကို အဓိက ထားတိုက်ပါတယ်။ တစ်ဖက်အသင်းမှာ snipe လုပ်တဲ့သူပါရင် ကိုယ့်ရဲ့ အဝေးပစ်သမားတွေ အရင်ကျကုန်ပါတယ်။
Magic reflection ရန်သူ့ရဲ့ maagic နဲ့ ပစ်တဲ့သူတွေကို သူတို့ပစ်တဲ့ magic ပြန်မှန်စေတာပါ။ အနီးပစ် အဝေးပစ် သမားတွေအတွက်ကတော့ retalitate ရှိပါတယ်။ သူ့ကိုထိတာနဲ့ ပြန်ချပါတယ်။ Magic reflection ကတော့ Magic သုံးတဲ့သူတွေကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ retalitate ကတော့ physical damage သမားတွေကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Protect ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်အကောင်တွေရဲ့ armor ကို ထပ်ပေါင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Armor တစ်ခုထဲရှိနေပေမယ့် ရန်သူ့ရဲ့ attack ကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ရန်သူရဲ့ damage က ၅ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ armor တစ်ခုထဲနဲ့ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ခြွင်းချက်တော့ ရှိပါတယ်။ Piercing ကတော့ armor ကိုဖောက်ပြီးတိုက်ခိုက်တာပါ။ ကိုယ့်အကောင့်က3damage ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ရန်သူ့အကောင့်မှာ armor တစ်ခုနဲ့ သွေးနှစ်ခုကျန်သေးတယ်ဆိုရင် သေပါတယ်။ Piercing မပါတဲ့အကောင်ဆိုရင်တော့ နှစ်ခါတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Trample ဆိုတာကတော့ သူတိုက်လိုက်လို့ တစ်ကောင်သေသွားတာနဲ့ နောက်က အကောင်ကို ဆက်တိုက်ပါတယ်။ ရန်သူသေသွားတိုင်းသူ့မှာ တိုက်ခိုက်ဖို့အလှည့်တစ်လှည့်ပိုလာပါတယ်။
Inspire ကတော့ ကိုယ့်အကောင်ရဲ့ physical damage ကိုတိုးစေတာပါ။ အနီးပစ်ကိုပဲ တိုးပေးပါတယ်။ Splash ကတော့ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဘေးက monster ကိုပါ damage ထိပါတယ်။ Screaming banshee က magical, Fire Demon က physical damage ထိစေပါတယ်။
Stun ဆိုတာကတော့ မူးစေတာဖြစ်ပါတယ်။ မူးနေတဲ့သူက မတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။ နောက်တစ်ခုကတော့ dodge ပါ။ အနီးပစ်နဲ့ အဝေးပစ်တွေကနေ လွဲချော်စေနိုင်ပါတယ်။ magic ကိုတော့ မရှောင်နိုင်ပါဘူး။
ကျွန်တော်ကျန်ခဲ့တဲ့ အချက်တွေရှိရင်လဲ မှတ်ချက်ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ညာဏ်စမ်းမေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ နှစ်သက်တဲ့ splinter နဲ့ သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်ကဘာလဲ။ သူ့မှာ ဘယ်လိုစွမ်းရည်မျိုးမရှိဘူးလဲ။ ဘယ်လို ထူးခြားတဲ့ စွမ်းရည်မျိုး သူများဆီမှာ မရှိတဲ့ စွမ်းရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Steemmonsters ဂိမ်းကို အနည်းငယ် စိတ်ဝင်စားမှု ရှိလာတဲ့အတွက် ဝမ်းသာမိပါတယ်။ အခုဒီ ပိုစ့်မှာတော့ quest တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကို ရေးသားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး စကားလုံး နှစ်လုံးကို ကြည့်ကြည့်ပါ။ အဲ့ဒိနေရာမှာ Water Splinter ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Water Splinter ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြဖို့လိုလာပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ summoner တွေကိုပဲဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ Monsters တွေကတော့ summoner ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ သူ့အလိုလိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Malric Inferno Fire Rare 3
Talia Firestrom Fire Epic 2
Alric Strombringer Water Rare 3
Xia Seachan Water Epic 2
Lyanna Natura Earth Rare 3
Xander Foxwood Earth Epic 2
Tyrus Paladium Life Rare 3
Kiara Lightbringer Life Epic 2
Zintar Mortaus Death Rare 3
Jarlax the Undead Death Epic 2
သာမန်အားဖြင့်တော့ Rare summoners တွေကိုပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Rare summoner တွေမှာ ability တစ်ခုပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ mana ကတော့ တစ်ခုပိုကုန်ပါတယ်။ Epic summoner မှာတော့ ability မပါပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ mana ကတော့ တစ်ခု လျော့ပါတယ်။
Quest တစ်ခပြီးသွားတာနဲ့ ဘယ် splinter နဲ့ဆော့ရမလဲ ဆိုတာပြောင်းသွားပါတယ်။ ပထမနေ့က splinter နဲ့လဲ ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် နောက်ထပ် splinter တစ်ခုနဲ့လဲ ဆော့ရင်ဆော့ရပါတယ်။
Quest လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ ပထမဆုံး battle ကို နှိပ်ရပါတယ်။ mobile မှာ ဆိုရင်တော့ ပုံမှာပြထားသလိုပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ညာဘက် အပေါ်ဆုံးနေရာမှာ dropdown menu ရှိပါတယ်။ အဲ့ ဒါကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိ menu ကိုပဲနောက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်တော့ ပေါ်လာတဲ့ menu ကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒိလို နှိပ်ပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်က ဘယ် splinter နဲ့ကစားရမလဲ ဆိုတာကြည့်ပါ။ နောက်တစ်ဆင့်မှာကတော့ Ranked ကိုနှိပ်ပါ။ ဖုန်းထဲမှာ ဆိုရင်တော့ Ranke အထိပဲပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံကတော့ Ranked ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနနဲ့ကတော့ Alric Strombringer ကို ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ Water splinter နဲ့ ကစားရမှာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။
သာမန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ melee monsters ကို ထိပ်ဆုံးကရွေးရပါတယ်။ အပေါ်ဆုံးကပေါ့။ သူ့အောက်မှာမှ အခြား monsters တွေကိုရွေးရပါတယ်။ Melee, Ranged, Magic နဲ့ ability တစ်ခုချင်းစီကို နောက် ပိုစ့်တစ်ခုမှာ ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ စည်းမျဉ်းတွေရှိပါတယ်။ အခုလက်ရှိစည်းမျည်းကတော့ melee monsters တွေ ချည့်ပဲရွေးလို့ရပါတယ်။ သူ့မှာ ပေးထားတဲ့ mana ထက် ပိုရွေးလို့မရပါဘူး။ Monsters ရွေးပြီးသွားရင်တော့ battle ကို နှိပ်ပါ။
Battle ကို မကြည့်ချင်ရင် Skip to result ကို နှိပ်ပါ။
10 ပွဲနိုင်ပြီးသွားရင်တော့ Claim ကိုနှိပ်လို့ရပါပြီ။ ပြီးရင် Open pack>Open Now>
Card5ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Card တစ်ခုချင်းစီကို တစ်ချက်စီနှိပ်ပြီး ဖွင့်ပေးပါ။ မဖွင့်ချင်ဘူးဆိုရင် သူများကို လက်ဆော်ပေးလို့လဲရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ရောင်းမယ်ဆိုရင်လဲ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ ဒီနေ့ဖွင့်လိုက်တာ 22 ဒေါ်လာနီးပါးတန်တဲ့ gold card တစ်ခုရပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုရင် အပေါ်ကလင့်ခ်ကိုသုံးပြီးLogin လုပ်ပေးပါ။
Steemmonsters: Team setups based on attacking style
I wrote two strategy posts already and this is my third post about steemmonsters strategy. There are many team setup according to their splinter so I will write about not the splinter but the attacking style.
Attacking to Tank with all fire power
Attacking Tank and the last
Attacking nearly every monsters
We can seealot of match in this style. This setup happens when there is no monsters with sneak or snipe ability in your team. This strategy is really good to use with the tank who has relative low health like SPINDBACK TURTLE. There are two kind of setups in this strategy. One is magical and another one is physical. Sometimes they may use mixed attacks that contains both physical and magical magical damage.
Counter: If enemy uses magical attack primarily, the opponent should use the tank with void ability because that has magic reduction. If enemy use physical attack primarily, the opponent should choose high armor and shield ability. Healing is also mandatory for the tank.
Attacking Tank and the last monster
This happens when the team has monsters with sneak ability. Sneaker will attack the last one. For this kinds of setup, oppoents he should has the monster with high health with dodge or high armor in the last position. Sometimes they use magical attack to attack the last position monsters. I did not see the monster that possess void ability.
Counter: There are only one monster that attack using magical damage so most of the time the monsters with high health, high armor and dodge ability will be okay for the opponents.
This happen when enemy team has the monsters with snipe ability, sneak ability and blast ability. In this case this is okay to play with the tank with relatively low health than other tanks. I prefer using the monster with high damage output because I need to pass through the tank. If I can pass through the tank the second position monster will have health lower than tank. This will be good to finish the battle as soon as possible so choose the line up to attack only the tank.
Counter: Try to attack the tank first if opponents can pass through the tank. The closeset monster will attack the tank so he can not attack behink. It will be better to get through at least two monsters to sureawin because their attacks are spreaded. So we should focus on only one opponent.
Promoting steemmonsters in myanmar
I have to write this in burmese language because this post is dedicated for the burmese steemians. I want to promote steemmonsters among myanmar bloggers. Please forgive me if you don’t understand.
ဒီတစ်ခါလဲ Steemmonsters အကြောင်းရေးပါဦးမယ်။ ကျွန်တော် Steemmonsters အကြောင်း english လိုတော့ ပိုစ့်တွေရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ မြန်မာလိုရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Steemmonsters ကို မြန်မာ steemians တွေကို ကစားစေချင်ပါတယ်။ ဒါက ပိုပြီးတော့ အကျိုးအမြတ်ရှိပါတယ်။
ပထမဆုံး 1000 rating ကိုရောက်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့ဒိလိုရောက်သွားရင်2ဒေါ်လာတန် booster packs နှစ်ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိ booster pack ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး ရလာတဲ့ card တွေကို ပြန်ရောင်းစားလို့ရပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ 1900 rating ဆိုရင်တော့5booster packs ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ အစီအစဉ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ဒေါ်လာ ၅၀ တန် ရှယ်ယာရှင် လေးယောက်ခေါ်ဖို့ပါ။ ဒေါ်လာ ၅၀ ရင်းထားတယ် ဆိုရင် အနည်းဆုံး တစ်လကို ၄ ဒေါ်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၈ ရာခိုင်နှုန်းပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိ card တွေကို ဖွင့်ပြီးရောင်းစားလို့ရပါတယ်။ ပိုကောင်းတာကတော့ အကောင့်တစ်ခု သပ်သပ်ဖွင့်ပြီး SP အနည်းငယ် ထည့်ပေးထားမယ် ဆိုရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Steemmonsters က ကဒ်တွေကို စီစဉ်ဖို့ပဲလိုတာပါ။ ပြီးတာနဲ့ battle ဝင် battle ကို မကြည့်ချင်ရင် ကျော်လိုက်လို့ရပါတယ်။ ကဒ်တွေကိုစီစဉ်တာကတော့ ကျွန်တော်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် ရှယ်ယာရှင်တွေအနေနဲ့ battle ဝင်ပေးဖို့ပဲလိုပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ battle ပါမဝင်ချင်ဘူးဆိုရင်ဆိုရင်တော့ အကောင့်တစ်ခုသတ်သတ်လုပ်ပြီး SP အနည်းငယ်ထည့်ပေးထားပါ။ ကျွန်တော့်ကိုတော့ private active key ပေးထားဖို့လိုပါတယ်။
Battle ကို ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆိုတာကို youtube video တစ်ခုလုပ်ပြီးတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက တစ်ကယ့်ကို အကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ရှယ်ယာရှင်လေးယောက်ရှိတာနဲ့ လုပ်ငန်းစမှာဖြစ်ပါတယ်။ Steemmonsters မှာ ၆ splinter ရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်ကို splinter တစ်ခုစီခွဲဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်လကို ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာကတော့ အတော်ကို အကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုက်ကြအောင်လားဗျာ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီ game အကြောင်းအတော်နားလည်ပါတယ်။ ဒီ game နဲ့ပတ်သက်တဲ့ strategy ပိုစ့်တွေကိုလဲ ရေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုယုံကြည်ထားလို့ရပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကို လက်ရှိဆုကြေးပေးနေတဲ့ အပေါ်ကိုကြည့်ပြီး ဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆုကြေးအပြောင်းအလဲဖြစ်လာရင်တော့ အစီအစဉ်လဲ အနည်းငယ်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
Share ဝင်တွေအနေနဲ့ ဒေါ်လာ ၅၀ နဲ့ညီမျှတဲ့ SBD ကို ကျွန်တော့်ဆီကို လွဲပေးဖို့လိုပါတယ်။ အနည်းဆုံး လေးယောက်ရှိမှ လုပ်ငန်းစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Booster pack အနေနဲ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒါကို ဈေးကွက်မှာ ပြန်ရောင်းဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့ဒိအတွက်တော့ အချိန်အနည်းငယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Steemmonsters: How to counter ZINTAR MORTAUS, HAUNTED SPIRIT, UNDEAD PRIEST, HAUNTED SPIDER, SCREAMING BANSHEE, TWISTED JESTER
I has written about Steemmonsters: How to counter SELENIA SKY, HAUNTED SPIRIT, UNDEAD PRIEST, HAUNTED SPIDER, SCREAMING BANSHEE, TWISTED JESTER. What about if someone choose ZINTAR MORTAUS other than SLLENIA SKY. It will be better choose SELENIA SKY. The team I mention in the previous post is very well balance. In this team there are two melee and two range attackers. But Choosing SELENIA SKY is better because no counter for him in Steemmonsters.
This team has double melee damage reduction. It is very good for low level match. The following image is ZINTAR MORTAUS’s team. It is the same as previous team only summoner is different.
The following team can win the ZINTAR MORTAUS’s team.
ZINTAR MORTAUS’s team can reduce -2 melee damage but FIRD DEMON is too strong. He deal the5damage to target and3damage to nearby unit. He got man of the match.
Let’s try to analyse what is their ability.
ZINTAR MORTAUS Summoner -1 melee damage to enemy
HAUNTED SPIRIT Melee Heal Magic Reflect Void
UNDEAD PRIEST Magic Weaken Slow
HAUNTED SPIDER Range Poison
SCREAMING BANSHEE Magic Blast
TWISTED JESTER Range Snipe Dodge
Position in the same like previous post. This is the best line up for this team I think.
SELENIA SKY Summoner +1 range attack
SERPENTINE SOLDIER Melee Shield Dodge Thorns
KOBOLD MINER MELEE Sneak
FIRE BEETLE Range Snipe
GOBLIN SHAMAN Magic Slow
FIRE DEMON Range Blast
In this set up FIRE DEMON changed the tide. Anyway this is good for fire splinter with2melee and2ranged attackers. This team is attacking everywhere so enemy should think of building team with magic and high health.
Thanks for reading my post. If someone has an idea about how to counter ZINTAR MORTAUS’s team, please leaveacomment. I will very appreciate for that.
Steemmonsters: How to counter SELENIA SKY, HAUNTED SPIRIT, UNDEAD PRIEST, HAUNTED SPIDER, SCREAMING BANSHEE, TWISTED JESTER
I normally this build in the low level match but with ZINTAR MORTAUS. ZINTAR MORTAUS give -1 melee damage but SELENIA SKY give +1 range attack. In his team there are2range attacker. That’s why he is choosing SELENIA SKY over ZINTAR MORTAUS. So to to battle with ZINTAR MORTAUS team we should choose Range attackers other than melee attackers so melee attackers with snipe should not be choose for battle with ZINTAR MORTAUS.
The following image is the build with SELENIA SKY. Undead Priest’s position is different with the above image.
The following team can win the SELENIA SKY’s team.
TWISTED JESTER will be in last position because of her high health and dodge ability and HAUNTED SPIRIT will be in first position because of he is melee, he has high heal, magic reflect and void. What will happen if he choose UNDEAD PRIEST in fourth position. Anyway he will lose I think.
MALRIC INFERNO Summoner +1 melee attack
SERPENTINE SOLDIER will be in first position and I don’t know why he put FIRE DEMON in last position. FIRE BEETLE has armors so he should put fire bettle in last position ifasneaker is in enemy’s team. But it is good for this battle because TWISTED JESTER will attack FIRE BEETLE first. I think Sneak ability of KOBOLD MINER give him upper hand and SERPENTINE SOLDIER is too strong and it makesawin. UNDEAD PRIEST has died early because of blast damage from FIRE DEMON and FIRE BEETLE and his weaken effect easily dispel in first round. If he pust HAUNTED SPIDER in position he will also die in first round. Thanks for reading my post.